अनमोललाई अदितीको कुन रुप मन पर्छ ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
अनमोललाई अदितीको कुन रुप मन पर्छ ?
शुक्रवारबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा उत्रिन लागेको युवा स्टार अनमोल केसी अभिनीत चलचित्र ‘कृ’ को मंगलवार साँझबाट नेपालका मल्टिप्लेक्सहरुमा बुकिङ खुल्ला भइसकेको छ । बुकिङ खुल्ला गरिएको केही घण्टामा नै दर्शकहरुले आफ्नो टिकट ‘रिजर्भ’ गरिरहेका छन् । कलरफूल ट्रेलरसँगै ‘मैले जानी नजानी’ र ‘यति यति पानी’ बोलको गीतको कारण पनि चलचित्रको इनिसियल व्यापार राम्रो हुने धेरैको अनुमान छ ।
यसअघिका चार चलचित्रमा रोमान्टिक हिरोको रुपमा प्रस्तुत भएका अनमोललाई ‘कृ’ मा विशेषतः एक्सन अवतारमा देख्न पाइनेछ । उनी आफूले चलचित्रका लागि एक्सनमा कडा मिहिनेत गरेको सुनाउँछन् । उनीसँग चलचित्रमा नव-नायिका अदिती बुढाथोकीले स्क्रिन शेयर गरेकी छिन् । उनलाई अनमोलको स्टारडमले आफूलाई कुनै असर नगर्ने बताउँछिन् ।
हालैमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘इन्स्टाग्रामकी अदिती मन पर्‍यो कि रियलकी ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा अनमोलले भने, ‘आखिर अदिती त अदिती नै हो । उसको जुन पनि रुप राम्रो छ । घरवाली र बहारवाली दुवै रुप उनको राम्रो छ ।’ उनले अदितीको फिगरलाई एक शब्दमा ‘कोकाकोला’ भन्दै तारिफ गरे ।
सुरेन्द्र पौडेल निर्देशित ‘कृ’ ले बुधवार सेन्सर बोर्डबाट पिजी सर्टिफिकेट पाएको छ । अब १६ वर्ष उमेर मुनीकाले चलचित्र हेर्न अभिभावक लिएर जानु पर्ने हुन्छ । खतरनाक एक्सन सिन भएका कारण चलचित्रले सेन्सर बोर्डबाट पिजी सर्टिफिकेट पाएको हो ।